Ny fepetra vaovao no raisina ho an'ny Coronavirus ao amin'ny renivohitra | RayHaber | raillynews
HomeTORKIACentral AnatoliaAnkara 06Ny fepetra vaovao nalaina tamin'ny otrikaretina hita any an-drenivohitra
Ny fepetra vaovao nalaina tamin'ny otrikaretina hita any an-drenivohitra
18 / 03 / 2020 Ankara 06, Central Anatolia, PHOTOS, ANKAPOBENY, Highway, Tire Wheel Systems, Headline, TORKIA
Fepetra vaovao noraisina ho an'ny coronavirus eto an-drenivohitra
Ny masoivoho Ankara Metropolitan dia efa mailo miaraka amin'ireo mpizara rehetra ao anatin'ny sehatry ny ady amin'ny coronavirus. Tamin'ny fampandrenesana ny ben'ny tanàna Metropolitan Mansur Yavas, dia nisy ny fanapaha-kevitra vaovao mialoha. Ny saram-pitaterana azony avy amin'ireo orinasan'ny Metropolitan dia nahemotra roa volana. Raha ny Şefkat Evleri dia tafiditra ao anatin'ny fandaharan'asan'ny famonoana otrikaretina isan'andro, ny premieres an'ny teatra Renivohitra dia nalaina tamin'ny daty taty aoriana. Mba hisorohana ny lozam-pifamoivoizana sy hisorohana ny fihanaky ny tsimok'aretina, ny fandevenana ny olom-pirenena miaraka amin'ny fandevenana dia hatao nefa tsy miandry ny fotoam-bavaka. Ekipa manadio Metropolitan; Izy io dia manohy ny hetsika famonoana otrikaretina ao amin'ny tranom-bakoka, andrim-pitsaboana, efitrano fihainoana, fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana, andrim-panjakana, trano fitaizana, toeram-pitsaboana antitra, klioba fanatanjahantena, minibus ary taxi-be.
Ny fiambenana Metropolitan dia efa mailo miaraka amin'ireo mpizara rehetra noho ny fipoahan'ny coronavirus.
Ny Birao fandrindrana ara-pahasalamana, izay napetraka eo ambany fitarihan'ny lefitry ny sekretera lefitra Mustafa Kemal Çokakoğlu noho ny baikon'ny Ben'ny tanànan'ny Metropolitan Mansur Yavaş, dia manaraka ny fandinihana ny fanavotana sy ny fanadiovana 7/24. Ny Kaominin'i Metropolitan, izay mifantoka amin'ny hetsika fahadiovana, dia mampiditra fepetra vaovao tsirairay.
FIVORIANA MISY ARA-DALANA AVY ANY PRESIDENT YAVAŞ HANOMPOANA
Ny monisipaly Metropolitan, izay mampitandrina ny olom-pirenena amin'ny alàlan'ny efijery an-tanàna, sora-baventy ary takelaka, ary ao anatin'izany ny kaonty media sosialy, dia manohy mametraka fepetra vaovao amin'ny ady amin'ny valan'aretina.
Ny ben'ny tanànan'i Ankara Metropolitan Mansur Yavaş dia nanambara tamin'ny fanambarana nataony tao amin'ny kaonty sosialy azy fa ny vola voaray avy amin'ny orinasa aetrin'ny Metropolitan dia nahemotra roa volana. Tamin'ny fanapahan-kevitra noraisina, dia nomena tamina orinasa an-tsokosoko ny kaominina Metropolitan sy ireo mpiara-miasa aminy ary ireo mpiara-miasa aminy ny fanofana, izay sahirana ny fandoavam-bola.
FAMPISEHOANA ARY ANKADIAVOANA ARY NITANANA VAO AZONAO
Dokotera lehibe, izay mampitombo ny fepetra fanadiovana ny fahasalamam-bahoaka; nahitana trano 5 Famindram-po tao Etlik, Ruzgar, Varlik, Ulus ary Oncology, izay ijanonan'ireo marary sy ny havany ao anatin'ny fandaharam-pandresahana ataon'izy ireo isan'andro.
Raha nahemotra amin'ny daty taty aoriana ny fiantefan'ny fijerena ny teatra an-tsarimihetsika, dia misy ny fepetra vaovao natao hisorohana ny vahoaka hamorona sy hanaparitaka ilay viriosy. Raha ny fiara mande fandevenana no vonoina, ny fandevenana dia halevina nefa tsy miandry ny fotoam-bavaka, mifanaraka amin'ny fangatahan'ny olom-pirenena manana fandevenana.
FAHASOAVANA SY FAMPISORANA FAHASALAMANA 7/24
Sampana miaro ny tontolo iainana sy ny fifehezana ny tontolo iainana BELPLAS A.Ş. Raha mbola manohy miasa mandritra ny andro aman'alina manerana ny tanàna ireo ekipan'izy ireo, eo am-panaovana asa famonoana otrikaretina amin'ny fiara fitateram-bahoaka, minibus ary taxi-be isan'andro.
Tamin'ny fanapahan-kevitry ny minisiteran'ny Fanabeazam-pirenena, taorian'ny fiatoan'ny fiofanana teo anelanelan'ny 16-30 martsa dia mihena ny haben'ny mpandeha ao amin'ny bus, ANKARAY, Teleferik ary EGO, raha toa kosa ny Tale Jeneralin'ny EGO dia manohy ny fanaony andavanandro indrindra amin'ny ora sy fiasana amin'ny bus sy hariva amin'ny andro sy isa.
Faruk Kalender, mpikambana ao amin'ny Birao Fivondronamben'ny Fikambanan'ny Mpanorina sy Ozobian'ny Ankara Umum, dia nilaza fa "Misaotra ny munisipanay izahay sy ireo nandray anjara tamin'ny fahasalaman'ny olona sy mpivarotra mpamily". Misaotra anao tamin'ity serivisy ity. Tena faly izahay amin'ity fomba ity, izay nataonay tamin'ny fiheverana ny fahasalamanay manokana sy ny fahasalaman'ny mpanjifanay. ”
Misaotra ny ben'ny tanàna Metropolitan Mansur Yavaş noho ny asa fanitarana natao tamin'ny fijanonan'ny fiara fitateram-bahoaka, indrindra tany Güvenpark, Bentderesi ary Sincan, Sincan Chauffeurs ary ny filohan'ny Federasiona automobil Isa Yalçın:
"Noho ny valanaretina izao tontolo izao dia iharan'ny lozika amin'ny firenentsika isika ary manantitrantitra bebe kokoa an'io. Ho finaritra anie Andriamatoa ben'ny tanàna eto Metropolitan. Voaroaka tanteraka ny fiara eto amintsika. Tena manan-danja tokoa izany eo amin'ny lafiny fahasalamana ary hodorantsika koa ny fiaranay. ”
Raha ny asa fanadiovana kosa dia manara-maso ny ekipan'ny polisy ao amin'ny Distrika Metropolitan. Ny fangatahana famonoana otrikaretina, tranombakoka ara-pahasalamana, hotely, efitrano fihainoana, tranoben'ny fikambanana tsy miankina, orinasam-panjakana, trano fikolokoloana, foibe fikarakarana zokiolona ary klioba fanatanjahantena. Ny ekipan'ny departemantan'i Urban Aesthetics dia manatanteraka asa fanadiovana tsara any amin'ny toerana ara-kolontsaina sy ara-tantara, indrindra eny an-dalambe, arabe ary lalantsara, amin'ireo faritra iraisana sy fialamboly.
Fepetra vaovao ho an'ny Coronavirus ho tonga ao Ankara
Antso fanamarihana ny BTS: 'An'hetsiny no miambina ny hetsika'
Ny fepetra fisorohana fiaramanidina dia atao ao amin'ny seranam-piaramanidina New Istanbul
Ny fepetra vaovao nalaina tamin'ny fanoherana Coronavirus ao Izmir
Nitsahatra ny fitaterana maimaimpoana ho an'ny olom-pirenena 65 taona ary mihoatra ny renivohitra ..!
Làlana tondra-drano amin'ny làlana Asphalt tao amin'ny Renivohitra
Nitombo avo roa heny ny tsimokaretina virosy tao amin'ny Metro sy ny Ankaray St an
Fiarabe fitateram-bahoaka amin'ny renivohitra
Voafahana tsirairay ny hetraketraka any an-drenivohitra
Fitetezana ny Railway Çuf Çuf Kemalden ao amin'ny Renivohitra
Zavatra tsy ampy / fanononana tsy ampy amin'ny teny latina
Ny seranam-piaramanidin'ny Sincan-Kayaş dia nanomboka tao an-drenivohitra
Fampiasana fitateram-bahoaka any Bursa
Androany amin'ny tantara: 8 Aprily 1922 Black Sea Sahara Line